Usoro 5 iji weta ozi ịntanetị gị na Ndụ | Martech Zone
N'ime ihe karịrị 68% nke email niile ịbụ SPAM, ọ bụghị naanị na ọ na-esiri ike ịnweta email gị na igbe mbata, ịmepe ya na ọdịnaya ịpịre chọrọ ezigbo nlebara anya. Veragbado ọdịnaya email na-adị ndụ nwere ike ịbụ atụmatụ nke na-etinye ozi ịntanetị gị n'elu.
Gụnyere ọdịnaya email dị ndụ nke na-agbanwe na oge bụ isi ihe iji nyefee ndị debanyere aha gị ozi dị mkpa n'oge kwesịrị ekwesị. Na infographic dị n'okpuru ebe a, anyị na-ekekọrịta ụdị ọdịnaya email dị ndụ ise na otu esi etinye ha na mgbasa ozi email ọzọ gị. Site na Lyris Infographic, Ndụ Email Dị Ndụ: Usoro 5 iji weta ozi ịntanetị gị na Ndụ.
Ngụda oge, ịchebe ọnọdụ, ịchebe ngwaọrụ, njikarịcha onyonyo na ihu igwe nwere ike bụrụ ihe ndị na - enyere ozi ịntanetị gị aka.
Tags: Oge ngụdangwaọrụ ezubere icheemailozi infographicemail Marketingozi ahịa emailemail azum azumogo njikarịchaebi ndụdị ndụ email ọdịnayaezubere iche ebeokpokoroweather